Azo atao ve ny manatsara ny tranokalan'ny SEO amin'ny alalan'ny fampahalalam-baovao sosialy?
Ankehitriny, ireo manam-pahaizana web sy ny manam-pahaizana SEO dia samy mahafantatra fa ny fampivoarana ny môtô sy ny marketing ara-tsosialy sosialy dia mifamatotra amin'ny fifandraisany amin'ny lafiny fampandrosoana. SEO no fototry ny marketing ara-nomerika raha ny SMM dia natao hanangona mpihaino marobe manodidina ny marika iray. Ilaina ny filazana fa ny media sosialy dia tsy mamela mivantana mivantana ny vohikala amin'ny aterineto fa manampy amin'ny fahombiazan'ny SEO tranonkala SEO.
Noho izany, rehefa miasa ho anao ny famantarana ara-tsosialy, dia mety hanatsara ny ezaka SEO anao izany. Ao amin'ity lahatsoratra ity, hahita fanazavana saro-takarina ianao mba hahatonga ny votoatin'ny tambajotra sosialy bebe kokoa ho anao ary handray soa avy amin'ny fanentanana ara-tsosialy ara-tserasera.
Ahoana no mety ho fiantraikan'ny fiaraha-monina eo amin'ny toerana misy ahy?
Hanatsara ny endriky ny votoatin-javatra
Izany dia fanambarana voaporofo fa ny fizarana ara-tsosialy dia miara-miasa toy ny fananganana rohy ary mety hisy fiantraikany amin'ny fahitana ny pejy. Raha hita eo amin'ny fikarohana ny votoatinao dia mety ho hitan'ny mpitoraka bilaogy samihafa, ny mpanao gazety ary ny tompon'ireo sehatra nicha misy azy izay afaka mahita izany votoaty sarobidy izany ary mametraka rohy mankany aminy ao amin'ny loharano. Ho vokatr'izany, ity pejy ity dia mety ho laharam-pahamehana kokoa. Noho izany, ny fizarana ara-tsosialy dia misy fiantraikany amin'ny laharana amin'ny tranga raha toa ka manandratra ny fahitana eo amin'ireo olona izay mamorona votoaty sy ireo liana amin'ny lohahevitry ny votoaty ary hita fa tena sarobidy izay mametraka rohy amin'izany. Vokatr'izany, ny fitomboan'ny fahitan'ny mpamorona dia mampitombo ny fahafahana hahazo rohy mifandraika amin'ireo mpampiasa izay manome ny rohy ifehezana.
Mba hampitomboana ny lanjany ho an'ny toerana misy anao, ny votoatinao dia tokony handalo amin'ny dingana efatra - fizarana sosialy, fahatsapana ara-tsosialy, fahatsapana mpamorona ary farany ny rohy sy ny fanamarihana. Azonao atao ny manatsara ity dingana ity amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ny mpamorona sy ny hevitry ny mpitarika. Ny mpitarika ny fanehoan-kevitra ao amin'ny sehatry ny media sosialy dia manitatra ny fahitan'ny mpiserasera, raha ny olona izay mamorona votoaty dia manome tombony ho anao.
Mitodiha any amin'ny backlinks
Ny isa sy ny kalitaon'ny backlinks izay manondro ny loharanon'ny Internet Ny singa fototra tena ilaina ho an'ny fitaovam-pitadiavana. Ny sehatra media sosialy dia loharano tonga lafatra ahafahana mahazo rohy ho an'ny fahalalahana. Mila mamoaka ny votoatin'ny SEO ianao sy ny mombamomba anao ao amin'ny pejin'ny haino aman-jery sosialy ianao mba hampiasana azy ireo ho toy ny sehatr'asa ho an'ny rohy hafahafa. Ny kalitao dia manangana fanentanana ara-tsosialy amin'ny tambajotra sosialy miasa mba handrisika ny mpiserasera hanaraka ny pejinao ary hifanerasera amin'ny votoatiny (apetaho ny tiany, mametraha fanehoan-kevitra ary miverena). Ny tanjona voalohany amin'ny SMM dia ny hamporisika ny fifandraisana amin'ny votoaty hananganana ny isan'ireo famotsorana sy ny aoriana any aoriana. Noho izany, ny votoaty tsara kalitao miaraka amin'ny fanentanana ara-tsosialy ara-tsosialy amin'ny tambajotra sosialy dia mitondra fifamoivoizana be mikaroka kokoa amin'ny tranokalanao amin'ny alàlan'ny backlinks kalitao.
Hanatsara ny fanentanana ny marika
Ny sehatra media sosialy dia toy ny sehatra digitale hafa izay mety hahitanao mpanjifa ny marika anao ary hianatra bebe kokoa momba azy io. Amin'ny alalan'ny media sosialy, azonao atao ny manangana fifandraisana mahatoky sy mafana amin'ny mpihaino anao ary hampitombo ny fahatsiarovanao ny marika. Noho ny fampahalalam-baovao sosialy SEO, ireo mpampiasa dia hahatsikaritra mora kokoa anao amin'ny fikarohanao ary miezaka kokoa ny miditra amin'ny tranokalanao. Ankoatra izany, ny fahatsiarovanao marika azonao raisina amin'ny alàlan'ny fantsom-pampahalalam-baovao sosialy dia mety hitondra fitaterana fikarakarana fikarakarana marika amin'ny fikarakarana marika amin'ny tranokalanao.
Ahoana ny SEO ny kaontiko amin'ny media sosialy?
Noho izany, efa nianatra momba ny tombontsoa entin'ny fampahalalam-baovao sosialy ho any amin'ny tranonkala fanatsarana sy fisainana ianao. Izao, izao no fotoana hifanakalozan-kevitra momba ny SEO sasany izay afaka manatsara ny fanatrehan'ny media sosialy.
Ireo hafatra sy profil optimization
Ny sehatra media sosialy dia mitovy amin'ny karoka fitadiavana, manome ny valiny mahaliana amin'ny fangatahan'ny mpampiasa mifototra amin'ny fikarohana manan-danja teny. Izany no antony ilainao hahazoana antoka fa ny lahatsoratra rehetra dia ahitana teny fanalahidy avo lenta, manana rafitra mendrika ary mifandray amin'ny lohahevitra mifandraika amin'ny raharaham-barotra. Ahoana ny momba ny fanatsarana ny mombamomba anao, mila mihetsika amin'ny lojika ianao, mametraka teny fanalahidy voatokana amin'ny anaram-boninahitra, lohateny ary eo am-piandohan'ny lahatsoratra.
Ampiharo ny tenifototra amin'ny fomba
Ao amin'ny sehatra media sosialy, ny tenifototra dia mitana andraikitra mitovy amin'ny fangatahan'ny fikarohana amin'ny milina fikarohana, fanampiana ireo mpampiasa hitady ny votoatiny tadiaviny. Mila manao fikarohana tenifototra ianao hahatakatra ny fomba fiasan'izy ireo ho an'ny sehatra media tsirairay sy ny fomba hampiharana azy ireo marina. Ankoatra izany, mila mampahafantatra ianao fa ny tenifototra dia midika ho fampiasana izany ho an'ny tanjona tsara. Mba hampiasa ny tenifototra amin'ny fomba mety, azonao atao ny mampiasa ny boaty fikarohana amin'ny sehatra sosialy.
Ambarao ny fanavaozana ankapobeny ao amin'ny tranokalanao amin'ny alalan'ny tambajotra sosialy
Ambarao amin'ny fotoana rehetra amoahanao ny votoaty vaovao ao amin'ny blôginao na tranonkala ny mpihaino azy. Ny fomba tsara indrindra hanaovana izany dia ny famoronana hafatra sosialy ho an'ny Facebook, Twitter, Instagram ary ireo sehatra media sosialy hafa. Izany dia hanampy anao hamorona hafatra manan-danja izay azo jerena ao amin'ny fikarohana an-tanindrazana ary manintona mpampiasa misimisy kokoa any amin'ny faritra misy anao.
Ampiharo ny fanamarihana sy ny fanamarihana ny kaonty media sosialy
Mba hahitana ny mombamomba anao amin'ny motera fikarohana , mila mamaritra sy mametraka olona hafa ao anatin'ny votoatiny ianao. Ny tombony iray dia ny fampahalalana ireo marika ho an'ireo mpampiasa ireo. Ny tombontsoa iray hafa dia ny hoe voatery hiditra amin'ny lahatsoranao ianao na hizara izany amin'ny olona iray izay nolazainao tao amin'ny votoatiny. Vokatr'izany dia manome fahafahana bebe kokoa amin'ny fitondrana kalitao sy fifamoivoizana amin'ny tranokalan-tserasera izay azo inoana fa hivadika ho fivarotana sy fitomboana.
Misy ihany koa fomba hafa hanatsarana ny fifandraisan'ny mpanara-dia anao amin'ny votoaty sosialy. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, mifandray amin'ny kalitaon'ny votoatiny izy ireo. Andeha isika hiresaka momba ny sasany amin'izy ireo.
Voalohany indrindra, eritrereto ny endriky ny hafatrao. Tokony hisoroka lahatsoratra lava loatra sy tsy misy vaovao ianao, izay milefitra amin'ny vaovao. Ny mpampiasa dia mamaky ny votoatin-kevitra maimaim-poana sy mazava tsara 200-300 lava indrindra, indrindra amin'ny sehatra media sosialy.
Faharoa, miresaha amin'ny votoaty hita maso raha mahita ny mombamomba ny mijery tsara kokoa noho ny lahatsoratra ny mpampiasa. Izany no antony, manoro anao aho hampiditra saripika, horonan-tsary, sary ary endri-javatra hafa ahitanao ireo mpanaraka anao.
Fahatelo, tokony hamporisika ny fanehoan-kevitra sy hifanerasera amin'ny mpihaino anao ianao. Ny mpividy dia manoro hevitra ny mamorona fifaninanana, fanomezana ary fampielezan-kevitra hafa izay hanampy anao hampifandray ny fifandraisanao amin'ny mpihaino anao. Ankoatr'izay, mila mifandray am-pahavitrihana amin'ireo mpanaraka anao ianao amin'ny fanehoan-kevitra - manombo-dresaka amin'ny lohahevitra tena ilaina, mametraka fanontaniana ary manentana ny valiny. Ny fanehoan-kevitra dia maneho karazana hetsika ara-tsosialy izay mivantana mivantana amin'ny fifandraisana amin'ny mpampiasa.
Ary farany, te-hanamarika aho fa tsy misy sekretera SEO manokana ho an'ny marketing ara-tsosialy. Mila mamorona pejy izay tian'ny olona sy vakiana isan'andro ianao noho ny fahafinaretany. Tokony hifantoka amin'ireo mpanara-dia anao ianao ary hanome azy ireo ny traikefa tonga lafatra. Izy no fanalahidy fototra amin'ny fahombiazana Source .